सुटुक्क पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको घरमा किन गए ओली ? कारण थाहा पाउने सबै चकित — Imandarmedia.com
सुटुक्क पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको घरमा किन गए ओली ? कारण थाहा पाउने सबै चकित
काठमाडौ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको घरमा पुगेको खुलासा भएको छ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आफूलाई झापामा हराउन सक्ने भन्दै आफूलाई बाधा हुने काम नगर्न भन्दै ज्ञानेन्द्र निवास पुगेका हुन्।
यो कुरा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले खुलासा गरेका हुन्। आगामी चुनावमा साँठगाँठ गर्न ओली ज्ञानेन्द्रकहाँ पुग्ने नेपालले खुलासा गरेका हुन्।
आज चाबहिलमा आयोजित महिला भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले भने, उनी सुटुक्क ज्ञानेन्द्र निवासमा पुग्ने गरेका छन्। राप्रपासँग साँठगाँठ गर्न खोजेका छन्।
विदेशीहरुको दलाली गर्ने पार्टीसँग तालेमेल मिलाउन खोजिरहेका छन् । किनभने उनी दक्षिणपन्थी शक्ति हुन्। दक्षिण पन्थीहरु दक्षिणपन्थी शक्तिसँग मिल्छन्
आफूहरु भने वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्ति भएको दाबी उनले गरे। त्यसैले लोकतान्त्रिक शक्ति र वामपन्थी शक्तिसँग मिलेर चुनावमा जाने उनले बताए। त्यसअघि संगठन निर्माण गर्न र आफ्नो हैसियत कायम गर्न उनले कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिए ।
उनले भने, ‘पहिले तपाईंहरु आफ्नो शक्तिमाथि भरोसा गरेर, संगठन निर्माण गरेर, आफ्नो हैसियत कायम राखेर अघि बढ्नुस्। आफ्नो हैसियत नभएकालाई कसैले पत्याउँदैनन् ।’
उनले आगामी चुनावमा कांग्रेससँग गठबन्धन गर्ने उनले बताए। कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणाले पनि गठबन्धनको कुरा गरेको भन्दै उनले खुसी व्यक्त गरे।
अब कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले चुनावमा गठबन्धन गर्ने भनेर औपचारिक निर्णयलाई आफूहरुले कुरेको नेता नेपालले बताए। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले जनताले हिसाबकिताब लिएर बसेकाले एमालेले छिट्टै न्याय पाउने बताएका छन।
शुक्रबार इटहरी उपमहानगर कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेम्वाङले अदालतले अन्याय गरेपनि जनताले निर्वाचन मार्फत न्याय गर्ने बताए।एमालेलाई अदालत मार्फत कमजोर बनाउन खोजिएको दाबी गर्दै जनताको अदालतले भने छिट्टै न्याय दिने उनले जिकिर गरे।
‘जनताले हेरिरहेका छन्, बहीखाता लिएर। अदालतमा विचाराधीन हुन्छ मुद्दा, त्यसैगरि अहिले जनताको अदालतमा पनि मुद्दा विचाराधीन छ’ नेम्वाङले भने, फैसला आउने दिन टाढा छैन। सबै कुराको हिसाबकिताब जनता लिन्छन्।
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले चुनावमा गठबन्धन गर्दै जाने हो भने नेपाली कांग्रेसको हालत भारतीय कांग्रेसको जस्तै हुने बताएका छन् । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नेता पुनले नेतृत्वसमक्ष चुनावी गठबन्धनको निर्णय नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
कांग्रेसको स्थिति राम्रो भइरहेको छ। गठबन्धन गर्नुपर्ने कारण क? हिजाको समीक्षा गर्ने कि नगर्ने? हामी पार्टीभित्रै एक ढिक्का होस् । पहिले पार्टीभित्रै गठबन्धन गरौं । गठबन्धन गर्ने हो भने मतभारलाई आधार बनाऔं।
गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने टिकट वितरण गर्ने अधिकार प्राप्त समितिले दिनुपर्छ। कांग्रेसले अन्य दलसँग गठबन्धन गर्नु पर्ने अवस्था छैन। सोलोडोलो तह छुट्टाएर गठबन्धन गर्नु फाइदाजनक हुँदैन।
गठबन्धन माथिल्लो तहले निर्णय लाद्ने हो भने घाटा हुन्छ। गठबन्धन गर्ने आधार र मापदण्ड त हुनुपर्छ होला नि, नेता पुनले भनेका थिए ।अहिले कांग्रेस बलियो भएकोले पनि चुनावी गठबन्धन गर्न आवश्यक नरहेको उनको तर्क थियो।
यदि गठबन्धन गर्दै जाने हो भने नेपाली कांग्रेसको हालत पनि भारतीय कांग्रेसको जस्तै हुने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।बैठकमा उनले भनेका छन्, भारतीय कांग्रेसले गठबन्धन गर्दै गयो।
अहिले उसैलाई खोज्नुपर्ने भाएको छ। आफ्नै कार्यकर्तालाई अरू दलमा भोट हाल्न सिकाएपछि हुने हालत त्यही हो। गठबन्धन गर्नै परे मतभारलाई हेरौं ।सानेपा स्थित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा जारी बैठकमा प्रदेश सभापतिहरूले आफ्नो धारणा राखिसकेका छन् ।
अधिकांश वक्ताहरूले गठबन्धन गर्नु परे स्थानीय आवश्यकता अनुसार नै गठबन्धन गर्न सकिने धारणा राखेका थिए। तर केन्द्रबाट गठबन्धनको निर्णय गर्न नहुने उनीहरूको अडान थियो।